Imiphumela ebingaba nayo uma izintaba-mlilo zase-Antarctica ziqhuma | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imiphumela yezintaba-mlilo zase-Antarctic iqhuma
UClaudi Casal | | Ukwahlukanisa, Isimo sezulu
I-Antarctica iyizwekazi eliseningizimu kakhulu eMhlabeni, liguqula indawo yalo ibe yingubo ebandayo. Yize ezinye izintaba-mlilo zaziwa iminyaka, imininingwane emisha yesathelayithi ibike ukuthi ngaphansi kwalelo qhwa kunezinye ezingaba yikhulu ezazingaziwa. A ukutadisha eyanyatheliswa e-United States National Academy of Sciences yabika iqiniso elibalulekile lokuthi kwenzeka eminyakeni eyi-18.000 eyedlule. Ososayensi bePaleoclimatic baphenya ezinye ukuqhuma okukhulu kweNtaba iTakahe, okwaqeda inkathi yokugcina yeqhwa kade kukhona.
Kusuka kumarekhodi atholakala eqhweni, ukuqhuma kwatholakala ukuthi kunothe nge-halogen futhi kudliwe i-ozone eyanele ukuze kudaleke imbobo enkulu kusendlalelo lwe-ozone. Kungaleso sikhathi lapho kwaqala khona ukwehliswa kwesivinini okwashesha, nakho okwakhomba eNtabeni iTakahe uqobo njengolubophezelekile. I- Kutholakale nemiphumela emibi kakhulu u-2.800km ukusuka lapho kwaqhuma khona, futhi imiphumela yayo ifinyelele ezindaweni ezingaphansi komhlaba.
Yini ebesingayilindela uma kuqhuma intaba-mlilo engaphezu kweyodwa?
Isimo besizobhebhetheka kakhulu. Futhi yize kungenakwenzeka ukuthi ukuqhuma okungaphezu kokukodwa kwenzeke ngasikhathi sinye, akusona isigameko esingenakwenzeka. Ngakolunye uhlangothi sinezintaba-mlilo ezingaphezulu, njengoba beyokwenza iNtaba iTakahe, futhi ngaphezulu kwangaphakathi kwaziwa ukuthi kuyasebenza kepha akuqhamuki. Kulokhu, okungenzeka ukuthi kube nokuqubuka kwesikhathi esizayo, ukuze kubangele ukungazinzi kuzodingeka ukuthi basebenze ngamanani amakhulu nangodlame kunjalo.
Esingakuthola kungaba yi ukuncibilika kobuso okusheshayo. Uma ukuqhuma kobudlova kwenzeka, kungaba nengozi yokuthi izintaba-mlilo ezintsha zingaqhuma. I-thaw, esivele ibaluleke kakhulu, ibingathanda ukwandisa amazinga olwandle. Umhubhe wasolwandle, okuyisifunda samanzi asolwandle osabalalisa amazinga okushisa, ubuzoshintshwa, uthinte ingxenye enkulu yezinhlobo zasolwandle. Ngokungachithi ukushisa kangako e-Antarctica, izinga lokushisa lizokhula kakhulu emhlabeni wonke, ikakhulukazi eningizimu yezwe. Lokho kungaba yi Umphumela we-Domino Okusatshwayo kungenzeka, iluphu yempendulo, ukuncibilika okukhulu, maningi amathuba okuthi ezinye izintaba-mlilo zizoqhuma. Esinye sezigameko ezimbalwa lapho izintaba-mlilo, ngaphandle kokufinyelela esigabeni sezintaba-mlilo ezinkulu, zingaphazamisa isigubhukane isimo sezulu emhlabeni wonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Imiphumela yezintaba-mlilo zase-Antarctic iqhuma
Kungani isibhakabhaka siluhlaza hhayi omunye umbala?
Kungani kubanda ngobusuku obucwathile?